Huawei Y9s: Famaritana, vidiny ary fanombohana ofisialy | Androidsis
Huawei Y9s: ofisialy vaovao ny marika eo anelanelan'ny marika
Vao omaly dia nisy fivoahana goavana momba ny Huawei Y9s, izay saika ny sivana rehetra no sivana. Tsy voatery niandry ela loatra isika mandra-panaovana ofisialy ity modely ity, satria efa natolotra. Izy io dia telefaona vaovao ao anatin'ny elanelam-bidin'ilay mpanamboatra sinoa malaza, izay azo antoka fa hamidy tsara amin'ity sehatra ity.
Ny antsipiriany iray izay mety efa nahasarika ny sain'ny maro dia ity Huawei Y9s ity Manana famaritana mitovy amin'ny Honor 9X Pro izy io, naroso tany Sina volana vitsivitsy lasa izay. Modely roa tena mitovy amin'ity antonony ity, saingy manana ny zavatra rehetra hahafaly ny mpanjifa izany.
Ho an'ny famolavolana, araka ny hita ao amin'ny famoahana, avelany hisy antsika fakantsary anoloana miendrika pop-up. Io dia ahafahan'ny efijery manararaotra tsara ny alohan'ny telefaona, miaraka amin'ny paiso kely manify. Ao an-damosiny dia manana fakan-tsary telo isika, raha eo kosa ny fantsom-panaovana rantsan-tànana amin'ity tranga ity amin'ny iray amin'ireo sisiny ireo.
Huawei dia manohy mampitombo ny varotra ao Shina
1 Famaritana Huawei Y9s
Famaritana Huawei Y9s
Amin'ny ambaratonga teknika dia aseho azy ho maodely mivaingana amin'ity antonony afovoany ity. Ny famaritana ankapobeny an'ity Huawei Y9s ity dia tsara, tena mandanjalanja. Misongadina izy, toy ny mahazatra amin'ity fizarana tsena ity, ho an'ireo fakantsary. Na dia mamela antsika bateria tsara aza izy io, izay hanome anao ny fahaleovan-tena tsara amin'ny fotoana rehetra. Ka maodely izay mifanaraka amin'ny zavatra tadiavin'ny mpampiasa amin'ny fotoana rehetra. Ireto avy ireo antsipirihany feno:
Screen: LCD 6,59-inch miaraka amina FullHD + vahaolana (2.340 x 1.080 teboka)
Mpandrindra: Kirin 710F
Fitehirizana anatiny: 128 GB (azo ovaina miaraka amina karatra micro SD hatramin'ny 512 GB)
Fakan-tsary any aoriana: 48 MP misy vava f / 1.8 + 8 MP misy vava f / 2.4 + 2 MP misy vava f / 2.4
Fakan-tsary anoloana: 16 MP miaraka amina f / 2.2 aperture
Batterie: 4.000 mAh misy fiampangana haingana 10 W
Rafitra miasa: Android 9 Pie miaraka amin'ny EMUI 9.1
Fifandraisana: WiFi 802.11 a / c, Bluetooth 4.4, USB-C, jack mm 3,5mm, 4G / LTE, GPS, GLONASS
Ny hafa: fantsom-panafody
Refy: 163,1 × 77,2 × 8,8 mm
Milanja: 206 grama
Toy ny maodely maro hafa ao anatin'ny elanelam-potoana ankehitriny, ity Huawei Y9s dia mampiasa fakantsary aoriana telo. Ankoatr'izay dia miaraka amina sensor 48 MP lehibe izy io, izay tsy isalasalana fa fandrosoana lehibe eo amin'ity sehatry ny tsena ity. Eo akaikin'ity sensor ity dia ahitantsika zoro malalaka miaraka amin'ny sehatry ny fahitana 120 degre amin'ny 8 MP. Raha ny sensor fahatelo an'ny telefaona dia sensor ho an'ny fandrefesana lalina, 2 MP. Ny fakantsarin'ilay fitaovana dia ampiasain'ny fitsikilovana solon'ilay marika mba hanomezana azy ireo fomba fakana sary fanampiny sy fitadiavana seho.
Ny bateria dia teboka matanjaka ao amin'ity Huawei Y9s ity, miaraka amin'ny fahaizany 4.000 mAh. Izy io dia hanome antsika fahaleovan-tena tsara amin'ny fotoana rehetra, ankoatry ny mifanentana amin'ny sarany haingam-pandeha 10W, araka ny hita ao aminy. Miaraka amin'ny mpanamory finday dia tokony hanantena fahombiazana tsara amin'io lafiny io isika.
Momba ny fandefasana an'ity Huawei Y9s eny an-tsena ity dia misy antsipiriany vitsivitsy hatreto, raha tsy misy. Ny fitaovana dia efa hita eo amin'ny tranokala manerantany marika, noho izany dia fambara na antenaina fa hisy ny fanombohana iraisam-pirenena. Na dia mbola tsy nizara data aza ny orinasa amin'izao fotoana izao. Tsy mbola nomena daty na tsena izay hametrahana azy amidy. Tsy manana data momba ny vidiny ihany koa izahay izao.
Ny fantatray dia ity fitaovana ity izay misy fitambarana RAM sy fitehirizana tsy manam-paharoa. Na dia manana loko roa hafa hisafidianana ianao, Inona no atao hoe Crystal Mainty sy Fiainan'ny mamatonalina?, araka ny hitanao eto amin'ny Internet. Manantena izahay fa tsy ho ela dia hisy angona mivaingana bebe kokoa amin'ny fandefasana an'ity Huawei Y9s ity eny an-tsena. Satria mety ho safidy mety tsara io fizarana tsena io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei Y9s: ofisialy vaovao ny marika eo anelanelan'ny marika
WhatsApp dia mandoaka ny bateria amin'ny telefaona Xiaomi sy OnePlus
Ho tonga miaraka amin'ny bateria lehibe kokoa ny Galaxy S11